10 Best Zoos ileta Gị na Na Na Na Na Na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Best Zoos ileta Gị na Na Na Na Na Na Europe
Oge Ọgụgụ: 7 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 27/11/2020)
Ije ije na umuaka ịga Europe nwere ike ịbụ ihe ịma aka. Ya mere, ọ dị oke mkpa itinye obere ọrụ ụmụaka ga - anụ ụtọ, dị ka ileta otu n'ime 10 zoos kacha mma na Europe. Offọdụ n'ime ụlọ zoo kacha mma n'ụwa dị na Europe. N'ime obi obodo kacha mma na Europe, enwere ebe nsọ dị ndụ, na 10 kacha mma zoos ileta na ụmụaka na Europe.
1. Schonbrunn Zoo Na Vienna
Schonbrunn Ogige na Vienna, bụkwa ebe obibi 500 ụdị anụmanụ, ebe 1752. Dị ka ọmụmaatụ, zoo kacha ochie na Europe bụ ebe enyí Africa na panda buru ibu dị. The 42 acres Viennese zoo dị n'ime obí eze ma nwee ọmarịcha ebe nkiri maka ụmụaka na ndị nne na nna.
Ọmụmaatụ, ulo mmiri ozuzo n'ime zoo bu ihe okike mmadu mere nke ezigbo ohia mmiri ozuzo na egbe mmiri ozuzo. Ka ị na-agagharị na-ele anya maka Asia ndị nwere obere okpuru na vbọl vampire. Na mgbakwunye, Polar bear ụlọ, agu na mgbada, ụlọ koala na ọtụtụ ụlọ ndị ọzọ nke anụmanụ ndị magburu onwe ha na-echere gị.
Ọnụ ụzọ nke Schonbrunn Zoo na Vienna bụ n'efu na njem Vienna. U nwere ike iru ebe U4 Hietzing n’ime ala.
2. 10 Zoo kacha mma na Europe: Ogige Alpine na Innsbruck
Dị na breathtaking Tyrol ke Austria, Alpine zoo dị na Innsbruck bụ ebe obibi karịa 150 umu anumanu. You’ll find this amazing zoo at the foot of the Nordkette mountain range in the Austrian Alps. Ya mere, ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ njem ezinụlọ gaa Alps, Gbalia itinye oge maka Alpenzoo Innsbruck.
Themụ gị ga-eju oke aja aja, Lynx, ugo ọlaedo, okpokoro, na oku oku. Ndị a bụ ụfọdụ ụmụ anụmanụ na ụmụ anụmanụ ị ga-ahụ n’ụlọ zoo Alpine. Mgbe ụmụ gị ga-enwe mmasị na ụmụ anụmanụ, a ga-akpọrọ gị site na pụtara echiche.
Nwere ike nweta a ịtụnanya zoo bụ site na ụgbọ njem ọha, site na etiti obodo. Ọzọkwa, enwere otutu uzo eji eme njem enyi na enyi, ya mere ị nwere ike ịhụ ihe niile.
3. Anụmanụ kacha mma na Czech Republic: Ogige Anụmanụ nke Prague
Prague ama ama maka akwa mmiri ya, ndise amam-ihe, ije, na ndị ọzọ. Otú ọ dị, ọtụtụ mmadụ amachaghị banyere zoo Prague, na nke ahụ bụ ebe nsọpụrụ n’etiti ụlọ zoo kacha mma nke Europe ileta ụmụaka.
o.5 square kilomita mee Prague zoo otu n'ime nnukwu zoos na Europe, ụlọ karịa 4000 anụmanụ. N'ihi ya, enwere ọtụtụ ebe obibi na anụmanụ iji kelee ya, ọmụmaatụ, Shanti ndị Asia, Bikira, enyi na enyi ozodimgba, na ọtụtụ anụmanụ ndị ọzọ pụrụ iche ma maa mma.
A na-emeghe ogige anụmanụ na Prague kwa ụbọchị ma na-eji ụgbọ ala ma ọ bụ tram. Ndụmọdụ anyị maka nnukwu ezinụlọ ị funụrị ọ inụ na Prague bụ ịhazi njem ụbọchị ezinụlọ zuru ezu-gaa na ụlọ ezumike Prague n'ihi na ụmụaka gị ga-achọ inyocha ya niile.
4. 10 Zoo kacha mma na Europe: Ogige Zoological nke Berlin
The oldest zoo in Germany is home to some of the extraordinary animals in the world. The Chilean flamingo and African Penguin are just a few of the special residents you’ll meet on your family visit to the Berlin zoo. Na-adịghị ahụkebe na osisi na anụmanụ na-eme ka Berlin otu nke kasị mma zoos ileta gị na na na Europe.
Ogige Zoological nke Berlin dị n'etiti otu n'ime ndị kasị akpali akpali obodo na Europe, na zoo bụghị sokwa. Ọ bụrụ n ’ịnọ n’obodo ogologo izu ụka, mgbe ahụ ikwesiri iwepụta oge maka otu ụbọchị na zoo, ụlọ ndozi, na akwarium.
Otu n’ime ihe ndị kacha mma gbasara zoo bụ na e nwere ọnụahịa tiketi pụrụ iche maka obere ma ọ bụ nnukwu ezinụlọ, otu ntinye n'ime zoo, ma ọ bụ ngwakọta na ọnụ ụzọ nke akwarium.
5. Ogige Ubi Oyi Na Hamburg: Ogige Hagenbeck
Hamburg bụ nnukwu obodo-ezumike ebe, na a fun obodo ileta na ụmụaka. The Hagenbeck Tierpark na Hamburg bụ otu ihe atụ nke ihe ọ funụ na Hamburg na ụmụaka. Ọ bụ otu n'ime ụlọ zoo mara mma na Europe na Germany. An-emeghe ụlọ ka ihe karịrị 1,800 anụmanụ, nke a kediegwu zoo nwere Arctic Ocean. Osimiri Arctic bụ ebe ị ga-amalite njem njem ezinụlọ, ma gaa na pola bea, penguins, na anụ ọhịa bea.
Ọ bụrụ n ’ịnọ na Hamburg ụbọchị ole na ole, mgbe ahụ ikwesiri inweta Kaadị Hamburg. N'ụzọ dị otú a, ị ga-enwe ọ enjoyụ nnukwu ego na njem nleta na-adọrọ mmasị, na ego na zoo na aquarium nke ebe okpomọkụ na zoo.
Berlin na Hamburg Zụọ Ahịa
Bremen na Hamburg Zụọ Ahịa
Hanover na Hamburg Zụọ Ahịa
Cologne na Hamburg Zụọ ahịa ahịa
6. Anụ ọhịa Antwerp na Belgium
Otu n'ime elu 10 zoos kacha mma na Europe bụ Antwerp Zoo. Dị nnọọ ka nke ọ bụla nke ịtụnanya zoos na anyị ndepụta, na Antwerp Zoo ị nwere ike ịmasị ụmụ anụmanụ kachasị mma n'ụwa. Otú ọ dị, otu n’ime ihe ndịiche Antwerp Zoo na zoo ndị ọzọ, bụ mmemme pụrụ iche maka anụmanụ ndị nọ n'ihe ize ndụ, dika bonobos na okapi.
Ogige zoo kacha mma na Belgium amụbawo nke ukwuu n'ime afọ. Zoolọ zoo toro nke ukwuu nke na ọ dị n'etiti obodo ahụ, dị nnọọ nso na ọdụ ụgbọ okporo ígwè Central. Ọzọkwa, zoo's Skywalk ga-ekpughe ihe kachasị breathtaking panoramic echiche nke ubi na otu n'ime apụ-na-na-kụrụ-ụzọ obodo na Europe.
7. Ogige La Palmyre Na Les Mathes, France
Ogige ụmụ anụmanụ mara mma nke Les Mathes dị na La Palmyre dị n'oké ọhịa na dunes. E nwere akara ụzọ na-ewe gị na ụmụaka na a njem gburugburu anụmanụ ụwa na ebube nke uwa na otu nke kasị mma zoos na Europe.
Anụ ọhịa ọhịa na nwamba ọhịa, Carreabean flamingos, na nduru buru ibu, bụ ụfọdụ ụmụ anụmanụ pụrụ iche ị ga-ahụ. Zoolọ ezumike a magburu onwe ya dị na mpaghara New Aquitaine na France, n'ụsọ oké osimiri Atlantic, a great adventure from Paris ụgbọ okporo ígwè.
8. Ogige Artis Na Amsterdam
dị nnọọ 15 Nkeji dị nso site na etiti obodo, ị ga-ahụ zoo mbụ na Amsterdam na otu nke kacha mma zoos na Europe. Artis Royal Zoo bu ulo zebra, butterflies, azụ azụ ebe okpomọkụ, na ntule ntule nke g’eme umu gi nma, na ARTIS-Micropia.
A gaa na Amsterdam zoo bụ otu n'ime ihe omume ezinụlọ kachasị mma ịme na Amsterdam. Na ọtụtụ pavilions, gaa akwarium, na osisi oak ochie, na Artis Zoo na Amsterdam bụ otu n'ime sinik na ebe pụrụ iche ịga leta na Netherlands.
Ga-aka mma ịzụta Artis Zoo na Micropia tiketi iji nwee obi ụtọ na ihe ọ bụla Amsterdam Royal zoo nwere inye.
9. Zoo kacha mma na England: Ogige Chester
Nnukwu zoo dị na England dị na Cheshire ma burukwa ulo kari 35,000 anụmanụ. Chester zoo bụ otu n'ime ụlọ zoo kacha mma na Europe ị ga-eleta ụmụ gị ebe ọ bụ na ọtụtụ anụmanụ na ubi a ga-enyocha. Anụmanụ si gburugburu ụwa, dị ka lemurs, nnukwu mpi, mpi, na ọtụtụ anụmanụ ndị ọzọ pụrụ iche.
Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị nwere oge iji mee ka ezinụlọ gị pụọ, Gbalia ileta ubi mara mma na zoo. Mkpokọta ifuru na Chester zoo nwere aha a ma ama n’ụwa, orchid dịkwa nnọọ iche. Nleta nke ụlọ Chester bụ ọrụ zuru oke ezinụlọ na-eme n'èzí.
10. Zoo kacha mma na Europe: Ogige Basel Na Switzerland
Zoolọ zoo kacha mma na Switzerland dị na obi Basel. Basel zoo bụ ebe ụmụ anụmanụ si n'akụkụ ụwa niile nọ, na ị ga-achọpụta anụmanụ ọ bụla bi na ya bi n'ime ogige dị iche iche.
Ihe ọzọ dị ịtụnanya na-etinye Basel zoo na nke anyị 10 zoos kacha mma na Europe, bu umuaka umuaka. N’ebe a umuaka gi g’enweta nnukwu ohere izute anumanu ndi sitere na gburugburu uwa, Pita, ma nye ha nri.
Nleta nke ulo anumanu bu ihe omuma di n’èzí nye ezin’ulo ya nile. Ubi na oke ohia, anụmanụ na osisi pụrụ iche, ga-adọrọ mmasị ma na-atọ ụmụaka ụtọ. The 10 kacha mma zoos na Europe ileta na gị na na, bụ Europe zoro ezo bara nnukwu uru, ma ha kwesiri ma ọ dịkarịa ala njem ụbọchị zuru ezu.
Munich na Basel Zụọ Ahịa
Bern ka Basel Zụọ Ahịa
Geneva na Basel Zụọ Ahịa
ebe a na Save A Train, anyị ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka Akpara ihe ịtụnanya nleta kasị mma zoos na Europe ụgbọ okporo ígwè.
You chọrọ Embed anyị blog post “10 Best Zoos ileta Gị na Na Na Na Europe” jidesie gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-zoos-visit-kids-europe%2F የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
adventure BestzoosEurope Njem Europe Europewithkids Ezinaụlọ ụmụaka Train Travel Travelingwithkids zoo